नङमा देखिएको ‘अर्ध चन्द्राकार’को अर्थ ? - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
नङमा देखिएको ‘अर्ध चन्द्राकार’को अर्थ ?
यस बाहेक नङमा देखिने ‘अर्ध–चन्द्राकार’ निशानको अर्को रोचक प्रसंग छ । यदि तपाईको बुढी औँलामा यो निशान देखियो भने अन्यमा कम देखिन्छ । त्यस्तै, यदि कुनै हातका औलाहरुमा पुरा निशान देखिएमा त्यो व्यक्ति स्वस्थ्य रहेको बुझिन्छ । तर, यदि कम देखिएमा त्यो व्यक्ति रोगी रहेको बुझिन्छ । यस्ता व्यक्ति शारीरिक रुपले कमजोर हुने र उसको पाचन शक्ति पनि कमजोर हुन्छ ।
कुन राशिलाई कस्तो सुहाउँछ ?
सोह्र श्राद्धः श्राद्धको समयमा गर्नै हुँदैन यी काम